जीएसटी र नेपालमा यसको प्रभाव - Karobar National Economic Daily
जीएसटी र नेपालमा यसको प्रभाव
query_builderJuly 9, 2017 1:46 PM supervisor_accountआनन्द काफ्ले visibility1142
अर्थशास्त्री एडम स्मिथले आफ्नो पुस्तक ‘वेल्थ अफ नेसन्समा कर प्रणालीमा समन्यायिकता, निश्चितता, सुविधा, मितव्ययिता हुनुपर्ने बताएका छन् ।
भारतले यिनै सैद्धान्तिक धरातलमा आफ्नो कर प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने ध्येयले १ जुलाई, २०१७ देखि जीएसटी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । भारतले यसलाई आफ्नो कर प्रणाली सुधारको सबैभन्दा महŒवपूर्ण खुड्किलो भनेको छ ।
जीएसटी वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा लाग्ने एक प्रकारको अप्रत्यक्ष कर हो । यो करको भार वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्ने उपभोक्ताबाट संकलन गरिन्छ । अप्रत्यक्ष करमा व्यवसायीहरूले उपभोक्ताबाट कर संकलन गरी सो रकमलाई राजस्वमा दाखिला गर्ने गर्छन् । जीएसटीले केन्द्र र प्रदेश तहले लगाएका करिब १५ प्रकारका विभिन्न करलाई प्रतिस्थापन गरेको छ ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच रहेका करका अवरोधहरू हटाएर एकल करको माध्यमबाट जीएसटीले भारतलाई एकीकृत गर्नेछ । जीएसटी कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा सन् २००३ देखि छलफल भएको थियो । १३ वर्षको छलफल, अन्तत्र्रिmया एवं तयारीसहित यो कर कार्यान्वयनमा आएको हो ।
जीएसटीले कसरी काम गर्छ ?
भारतमा जीएसटीका लागि दर्ता हुने सीमाको कारोबार २० लाख तोकिएको छ । यो सीमा केही उत्तर–पूर्वी राज्य र संरक्षित क्षेत्रका लागि १० लाख रहेको छ । भारतले अल्कोहल, पेट्रोलियम पदार्थमा जीएसटी लगाएको छैन भने केही अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवालाई जीएसटीको दायराबाट बाहिर राखी छुट दिएको छ । सोबाहेक अन्य १ हजार २ सय ११ वस्तु तथा सेवामा ४ दर (५, १२, १८ र २८ प्रतिशत) मा जीएसटी लगाएको छ ।
भारतको संघीय संरचनालाई ख्याल गरेर भारतमा दोहोरो जीएसटी प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जीएसटीका दुई तŒव रहनेछन्— केन्द्रीय जीएसटी (सी जीएसटी) र प्रादेशिक जीएसटी (एस जीएसटी) । केन्द्र र प्रदेश दुवैले वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धिमा जीएसटी संकलन गर्नेछन् ।
सम्बन्धित प्रदेशमा हुने वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धिमा केन्द्रले (सी जीएसटी) र प्रदेशले (एस जीएसटी) संकलन गर्नेछन् । खरिदकर्ताले खरिदमा तिरेको सी जीएसटीलाई बिक्रीमा संकलन गरेको सी जीएसटी कटाई बाँकी रहेको सी जीएसटी र खरिदमा तिरेको एस जीएसटीमा बिक्रीमा संकलन गर्ने एस जीएसटी कटाई बाँकी रहेको रकम दाखिला गर्नुपर्छ ।
सी जीएसटीमा तिरेको करलाई एस जीएसटीमा र एस जीएसटीमा तिरेको करलाई सी जीएसटीमा क्रेडिट दाबी गर्न पाइँदैन । कर संकलन र भुक्तानी कसरी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा देहायका तीनवटा उदाहरणबाट अझ प्रस्ट हुन्छ ः
१. एक प्रदेशमा बिक्री भई पुनः सोही प्रदेशमा हुने बिक्री : एक प्रदेशमा उत्पादन भएको सामान सोही प्रदेशमा बिक्री गर्दा विक्रेताले सी जीएसटी र एस जीएसटी संकलन गर्छ । सो सामान पुनः सोही प्रदेशमा बिक्री हुँदा बिक्रीकर्ताले सी जीएसटी र एस जीएसटी संकलन गर्छन् । पुनः बिक्री हुँदा साविकमा तिरेको करलाई मिलान गर्न पाउने सुविधा हुन्छ ।
२. एक प्रदेशमा बिक्री भई अर्को प्रदेशमा पुनः बिक्री हुने : यो केसमा पहिलो चरणमा सी जीएसटी र एस जीएसटी संकलन गरिन्छ । संकलन भएको रकम केन्द्र र राज्य सरकारमा जान्छ । पुनः जब सो वस्तु अर्को प्रदेशमा बिक्री गरिन्छ, एकमुस्ट अन्तरप्रदेश जीएसटी (आई जीएसटी) लगाइन्छ । यसरी संकलन भएको आई जीएसटी केन्द्र सरकारमा जान्छ ।
३. अर्को प्रदेशमा बिक्री भै पुनः सोही प्रदेशमा बिक्री हुने : पहिलो चरणमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा बिक्री हुँदा आई जीएसटी लगाइन्छ, जुन केन्द्र सरकारमा जान्छ । अर्को प्रदेशबाट आएको वस्तु जब सोही प्रदेशमा पुनः बिक्री हुन्छ, सो अवस्थामा सी जीएसटी र एस जीएसटी संकलन गर्नुपर्छ । सो अवस्थामा क्रेडिट मिलान गर्दा आई जीएसटीको आधा सी जीएसटी र आधा एस जीएसटीमा कट्टी दाबी गरी बाँकी रहेको रकम दाखिला गर्नुपर्छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतकेन्द्रित छ । आयात एवं निर्यातमा भारतको हिस्सा दुईतिहाइभन्दा बढी रहेको छ । त्यसैले भारतीय अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न जान्छ ।
(क) सकारात्मक प्रभाव ः जीएसटीको कार्यान्वयनबाट भारतको अर्थतन्त्रमा २ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान भारतीय पक्षले गरेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणबाट भएका उपलब्धिका छिटाहरूबाट नेपालले पनि फाइदा लिन सक्नेछ ।
हामी संघीयतालाई संस्थागत गर्ने क्रममा छौं । संघीयतामा विभिन्न तहका सरकारहरूमा काम र दामको बीचमा उचित तालमेल आवश्यक पर्छ भने अर्कातर्फ विभिन्न तहका सरकारहरूबीच सहयोग र समन्वयको आवश्यकता पर्छ ।
भारतले कार्यान्वयनमा ल्याएको जीएसटी र सोको अभ्यासबाट नेपालले आगामी दिनमा संघीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारको कर प्रणाली सुदृढीकरणमा पाठ सिक्न सक्छ । भारतले जीएसटी कार्यान्वयनबाट अनौपचारिक व्यापारलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यो कार्यान्वयनसँगै भारतमा नन–इन्भ्याइसिङ, अन्डरइन्भ्वाइसिङ र ओभर इन्भ्वाइसिङको समस्यामा कमी आउने देखिन्छ ।
नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाका कारण हुँदै आएको अनौपचारिक व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । जीएसटीका कारण कतिपय भारतीय सामान सस्तो हुन पुगेका छन् । भारतले निर्यातमा जीएसटी लगाएको छैन । त्यसैले भारतमा सस्तो भएका भारतीय सामानहरू नेपालमा पनि सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुनेछन् ।
(ख) नकारात्मक प्रभाव ः व्यापारीहरूमा अन्योल छाउने, आपूर्ति प्रणालीमा समस्या पर्न सक्ने, भन्सार राजस्व संकलनमा प्रतिकूल असर पर्न सक्नेछ । यीमध्ये केही प्रभाव देखिसकिएका पनि छन् । जीएसटीका कारण सस्तो भएका सामानको नेपालमा पनि उपभोग बढ्न सक्नेछ, जसले गर्दा व्यापारघाटाको आयतन अझ फराकिलो हुन पुग्नेछ ।
भारतमा सामान सस्तो हुँदा नेपालबाट निर्यात हुने सामानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्छ, जसका कारण निर्यातको आधार अझ सानो हुन सक्छ । जीएसटीका कारण भारतमा केही सेवा विशेष गरी ढुवानीमा साविकमा भन्दा बढी कर लाग्ने देखिएको छ ।
यसबाट तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात अझ महँगो पर्न जाने देखिन्छ । नीतिगत रूपमा नेपालको कर प्रणाली उत्कृष्ट रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । भारतले कर प्रणालीमा सुधार गरेको जोसमा हाम्रा राम्रा कुराहरू भत्काउन सक्ने जोखिम पनि छ । यसतर्फ नीति–निर्माता सजग रहनुपर्ने देखिन्छ ।
जीएसटीबाट नेपालमा पर्ने र पर्न सक्ने सम्भावित प्रभावहरूका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी प्राप्त निष्कर्षका आधारमा नेपाली अर्थतन्त्रले सकारात्मक लाभ लिनेतर्फ देहायबमोजिम अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ :
(क) तत्कालीन रूपमा : जीएसटी कार्यान्वयनबाट देखा परेको अन्योलता र यसबाट तत्काल देखिएका माथि उल्लिखित नकारात्मक प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यकताअनुसार कूटनीतिलाई सुदृढ गर्नुपर्छ ।
(ख) मध्यकालीन रूपमा : भारतीय कर प्रणालीमा भएको सुधारका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा न्यून नकारात्मक प्रभाव कम पर्न दिन आवश्यकताअनुसार नीतिगत समायोजन गर्नुपर्छ ।
(ग) दीर्घकालीन रूपमा : नेपालको अर्थतन्त्र बलियो नभएका कारणले भारतको कर प्रणालीमा भएको परिवर्तनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई धेरै प्रभावित गर्न सक्ने देखिएको हो । हामीले परनिर्भर अर्थतन्त्रबाट अन्तर–निर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने गरी हाम्रो सोच, नीति तय गर्ने र सोही अनुसार कार्यान्वयनमा खरो उत्रिनुपर्ने देखिन्छ ।